Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Jamaika: Fandinihana tranga fanofanana vaovao manokana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett (ankavia) dia nampiato ny fihaonany tamin'ny filoha lefitry ny varotra iraisam-pirenena, American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), Ed Kastli, mba haka sary haingana. Fihaonana tany Madrid, Espaina, omaly, ny fotoana, mba hiresahana momba ny famoahana ny fianarana tranga fanofanana momba an'i Jamaika. Noraisina ny fanapahan-kevitra satria, hatramin'ny nanombohan'ny fiaraha-miasa amin'ny Ivon-toeram-pikarohana Jamaikana (JCTI), efa-taona lasa izay, maherin'ny 8,000 ireo Jamaikana matihanina amin'ny fizahantany no nahazo mari-pankasitrahana.
Izany dia nambara nandritra ny fivoriana tany Madrid androany maraina niaraka tamin'i Ed Kastli, filoha lefitry ny varotra iraisam-pirenena ao amin'ny AHLEI. Raha nanamarika fa mbola misokatra ny asa 1 tapitrisa ao amin'ny tsenan'i Etazonia ho an'ny mpiasan'ny fizahantany, ny Minisitra Bartlett dia nanantitrantitra fa mbola manan-danja io fiaraha-miasa io satria i Jamaika dia manohy mifantoka amin'ny fampandrosoana ny renivola manerana ny sehatry ny fizahantany.
"Namoaka torolàlana sy protocols COVID-19 ny AHLEI tamin'ny martsa 2020 ho an'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana, izay nozaraina taminay tao amin'ny Minisiteran'ny Fizahantany mba hiova ho programa fanofanana mba hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny mpiasa sy ny mpitsidika anay," hoy izy nanazava.
Ny JCTI dia sampana iray ao amin'ny Fonds Enhancement Tourisme (TEF), sampan-draharaham-panjakana iray Minisitry ny fizahan-tany. Ny JCTI dia tompon'andraikitra amin'ny fanamorana ny fampivoarana ny renivola maha-olona sarobidy ao Jamaika sy ny fanohanana ny fanavaozana eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
“Ivon’ny fizahantany Fampandrosoana ny firenena Jamaika. Tanjona lehibe iray amin'ireo fandaharan'asa sy hetsika ataon'ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny sampan-draharaham-panjakana eto amintsika ny hamorona asa izay manatsara ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny Jamaikana salantsalany”, hoy ny minisitra Bartlett.